अध्यक्ष गजुरेलको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बन्दै :: सुजिता कार्की :: Setopati
अध्यक्ष गजुरेलको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बन्दै
आंशिक प्राध्यापकहरूलाई बिना सर्त तत्काल करार गर्न माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मुल गेटमा आमरण अनसन बस्दै आएका नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. महेशकुमार गजुरेलको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बन्दै गएको छ।
आमरण अनसन बसेको बिहिबार नौ दिन पुग्दा डा. गजुरेलको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बन्दै गएको हो । उनले आंशिक प्राध्यापकहरूको माग सम्बोधन गराउन सरकारलाई बाध्य पार्ने उद्देश्यले दशैंको फुलपातीको दिनबाट आमरण अनसन सुरू गरेका थिए। तर, सरकारले आमरण अनसन बसेको नौ दिन बित्दा समेत बेवास्ता गरेपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको हो ।
रक्तचापमा आएको उतारचढाबका कारण डा. गजुरेलको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् । आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार गर्न माग गर्दै दिएको दबाब सरकारले बेवास्ता गरेपछि संघका अध्यक्ष डा. गजुरेलले आमरण अनसन सुरू गरेका हुन्।
आमरण अनसन सुरू गर्नु अघि गत असोज १० गते पत्रकार सम्मेलन गरी डा. गजुरेलले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन सरोकारवाला निकायसँग आग्रह समेत गरेका थिए।आंशिक प्राध्यापकहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकोमा संघको आपत्ति छ । यसअघि पनि संघले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज १९, २०७४, ०२:३६:११